စကာင်္ပူမိန်းခလေးငယ်တွေ အလွန်လိုက်စားလာတဲ့ အပျော်အချစ်ဇာတ်လမ်းတွဲလေးများ! | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Jobs & Careers » စကာင်္ပူမိန်းခလေးငယ်တွေ အလွန်လိုက်စားလာတဲ့ အပျော်အချစ်ဇာတ်လမ်းတွဲလေးများ!
Posted by Ko Nge on Sep 2, 2012 in Jobs & Careers, Money & Finance, Society & Lifestyle |4comments
Sex Addction ဆိုတဲ့ ရမ္မက်ဇာတ်လမ်း (သို့) လိင်နောက်ဆက်တွဲ(အပျော်အချစ်ဇာတ်လမ်းများ) ဘဲခေါ်မ လား အဖွဲ့အစည်းတခုက လိင်ပညာပေးဇာတ်လမ်းလေးပါ! ဆေးပညာအရ စိတ်ဝေဒနာရှင်ထိတောင်ဖြစ်နေကျလို့ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလို့ နားလည်သလို ဆီလျှော်စွာ ဘာသာပြန်ရေးလိုက်ရတာပါ! သီးခံပြီးဖတ်ကျပါ! အခုနှစ်ပိုင်းတွေမှာ လိုအင်ဆန္ဒမဖြည့်တဲ့အိမ်ထောင်ရှိ၊ မရှိစကာင်္ပူမိန်းခလေးငယ်တွေရဲ့အပျော်အချစ် ဇာတ်လမ်း လေး တွေရှာပြီး မိမိရဲ့တက်ကြွနေတဲ့ရမ္မက်အလိုဖြည့်စည်းမှု့ ဇာတ်လမ်းလေးးတွေပါဘဲ! လူငယ်တွေအတွက်တော့ အပျော်ဇာတ်လမ်းရှာတာ ပြဿနာမဟုတ်ပေမဲ့ အိမ်ထောင်ရှိလူတွေ အတွက်မှ တော့ နောက်ဆက်တွဲဂယက်ကျတော့…..ယောကျာင်္းလေးတွေ ရမ္မက်တင်ကြွနေရင် စကာင်္ပူရဲ့ မီးအိမ်နီခေါ် Kallang တွေမှာသွားပြီး လိုအင်ဆန္ဒဖြည့်စီးမှုတွေရပေမဲ့မိန်းခလေးတွေအတွက်တော့ ဒီလိုသီးသန့်နေရာမရှိတော့တော်တော်ပြဿနာရှိနေကျတာကိုး!လက်ရှိအိမ်ထောင်ရှိသူတွေကတော့ လူမှုရေးဖောက်ပြန်မှုတခုမဟုတ်ပါလားနော်? သဘာဝက မိန်းခလေးတွေရဲ့သူမတို့ တလတကြိမ် လာတတ်တဲ့ရာသီခွင်အရ ရမ္မက်အတက်ကြွဆုံးအချိန် ဖြစ်ရခြင်း မဟုတ်ဘူးလား! ယောကျာင်္လေးတွေနျင့် အတူအိပ်ချင်ကျတယ်လေ! သဘာကိုဘယ်သူမှလွန်ဆန်လို့ရမလဲနော်! ဆေးပညာအရ စိတ်ဝေဒနာတောင် ဖြစ်နေတယ်လို့ သိရတယ်! ဆေးတွေနှင့်ကုသလို့ရတဲ့ စိတ်ရောဂါတွေပါ၊ ဒါကြောင့် ယခုခေတ်မှီတဲ့မိန်းခလေးတွေက ဘယ်လို အပျော်အချစ် ဇာတ်လမ်းလေးတွေရှာကျလဲဆိုကို လိင်နောက်ဆက်တွဲလို့ အဓိပ္ပါယ်ရတဲ့တိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာလူနေမှုစရိတ်ကြီးမြင့်နှင့်အတူ မိန်းခလေးတွေတော်တော်များများ မိမိရဲ့ရမ္မက်လိင် လိုအပ်မှုတွေကို ဘယ်လိုရှာဖွေကျလဲ ဇာတ်လမ်းလေး တွေ ပါ! ရမ္မက်အလိုဖြည့်စွတ်မှုနှင့်အတူ စကာင်္ပူ တက္ကသိုလ် ပထမနှစ်ကျောင်းပြီးထားတဲ့ကျောင်းသူလေး လေးရဲ့သူမအတွေ့အကြုံအသစ်လေးတွေကို ဘယ်လိုလူတွေနှင့်တွေ့ကြုံပြီး ဘာတွေလေ့လာသင်ယူခဲ့ရသလဲ?
ဒီမှာမူရင်းဖတ်ကြည့်ပါ-Women under attack in Singapore over “sex addiction” series
ဒါကလက်ရှိစကာင်္ပူမှာအမျိုးသမီးငယ်တွေရဲ့ ရမ္မက်ဖြည့်စွက်မှုဇာတ်လမ်းလေး (အပျော်အချစ်ဇာတ် လမ်း များ) တွေထဲ ကအဖြစ်ပျက်လေးတခုပါ၊အသက်၁၈နှစ်ရှိ စကာင်္ပူပထမနှစ်ကျောင်းပြီးထားတဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူလေး သူမရဲ့တည်ငြိမ်စွာ ပြောပြတာက သူမရဲ့အတွေ့အကြုံနှင့် ဘယ်လိုလူတွေနှင့် တွေ့ဆုံပြီး တတ်ကျွမ်းကျင်လာ ခဲ့ပုံကို ပြောပြလာပါတယ်၊ငယ်ရွယ်တဲ့ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူအများစုတွေဟာ အဆင့်တန်းမြင့်မြင့်နေချင်ကျပါတယ်လို့ပြောပါတယ်၊ ဒါကြောင့်ငွေလိုတယ်! ငွေလဲရှာ စိတ်ဆန္ဒလိုအင်တွေလဲပြည့်ဆိုသလိုပေါ့၊…..(ငွေသည် လောကကြီးကိုသာယာအောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ စွမ်းရည်များကိုပိုင်ဆိုင်ထားသူပါလားနော်!….)
ဒီအတွက် ကောင်လေးတွေတော်တော်များများနှင့် အချိမ်းအချက်ပြုလုပ်ကျတယ် အများတွေ့ကြုံ နေရတာ က အားလုံးဟာ သူမကိုအပြင်ခေါ် ထုတ်ဖို့ကြိုးစားကျပြီး နောက်ဆုံး ညအိပ်နေကျဖို့ပါဘဲတဲ့! သူမကလဲ အမြဲသူမ သဘောကျတဲ့သူတွေအချို့နှင့်ချိမ်းတွေ့ကျပါတယ် တဲ့!သေချာတာက သူတို့တတွေအကောင်းဆုံးအချိန်မှာ တွေ့တာကောင်းပါတယ်လို့ LeeAnne ဆိုသူ က bikyamasr ကိုပြောပါတယ်၊ ယောကျာင်္းနှင့်ဆက်ဆံတာ အဆင်မပြေတဲ့အခါမှာ စိတ်ဆန္ဒာ ကျေနပ် ဖို့လုပ်ရပါတယ်တဲ့ သို့သော် ဒီလိုရက်တွေကို သူမကလဲ မနှစ်သက်ပါဘူးတဲ့”သူမက မကြာခင်မှရေးသားပုံနှိပ်သော asiaone.com မှာ “sex addiction” in the country လိင်နောက်ဆက်တွဲ (အပျော်အချစ်ဇာတ်လမ်းများ) တွေ ဒီမှာရှိနေကျပြီ ဆိုတာ ရေးသားဖော်ပြလာကျ ပါပြီတဲ့!သူမတို့တတွေ လိင်ဆက်ဆံကျပါတယ်၊ သို့သော် မိန်းမတော်တော်များတွေမှာ လိင်ဆက်ဆံမှုများ နှင့်ပတ်သက်ပြီး သူမတို့စိတ်တိုင်းမကျတာကို စိတ်မကောင်းစွာတွေ့နေရတာနှင့် ဒါလို ဆက်လက်ပြီး ကျေနပ်မှုမရရှိသောမိန်းမတွေပေါင်းပြီး အဖွဲ့အစည်းလေး ဖြစ်လာတာဖြစ်ကြောင်း သူမပြောပါတယ်။
သူမတို့တတွေနှင့် သူမအုပ်စုတွေရဲ့ ချိန်းတွေ့ကျတဲ့နေရာက ကျွန်းအနှံနာမည်ကြီးကော်ဖီဆိုင်တွေပါဘဲလို့ နေရာကိုတော့ အတိကျမရှိတဲ့ ချိန်းတဲ့နေရာအနှံလဲပေါ့နော်!သူမသူငယ်ချင်း Jumanaကအချက်ကျကျပြောပြီးအကြံပေးတာက “sex addction” ဆိုတာက တခါတရံ အမှန်တကယ် လိုအပ်နေတဲ့မိန်းခလေးတွေအတွက် တိုက်ပွဲတွေပါလို့ပြောပါတယ်၊ “အလွန်အန္တရယ်များတဲ့ နေရမှာရောက်နေတာပါတယ်တဲ့” ဘယ်လိုနေရာတွေမှာ မမြင်ရတဲ့ ပုန်းလျှိးဖွတ်လျှိုးလုပ်စားတဲ့ ကြေးစားယောင်္ကျားတွေ သို့မဟုတ် အဓမ္မမုဒိမ်းကျင့်သမားတွေ သိ်ု့မဟုတ် လိင်အတွက် ရုတ်တရက် တိုက်ခိုက်တတ်သူတွေရဲ့အန္တရယ်တွေရှိတတ်တာကြောင့်တကြောင်း? ဒီလိုအန္တရာယ်တွေ မရှိတဲ့ အားလုံးအတွက် “sex addiction” က ဆွေးနွေးတိုင်ပင်လို့ရတဲ့နေရာ အကြံတွေယူလို့ရတဲ့ သို့မဟုတ် စိုးရိမ်စရာမရှိတဲ့တန်ဖိုးဖြတ်လို့မရတဲ့နေရာလေး ဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်
Asiaone.comရဲ့ခေါင်းစီးပိုင်းနေရာယူထားတဲ့ အပတ်စဉ်အင်္ဂါနေ့တွေမှာအခန်းဆက်တွေရေးလို့ရတဲ့ အထိဇာတ်လမ်းလေးတွေရှိလာပါတယ်? ရေးသားထားတာက ဘယ်လိုမိန်းခလေးတွေ ဖြစ်ဖြစ် “random 4some with three men” ခေါ် မတူညီတဲ့ယောကျားင်္ ၃၊၄ယောက် နှင့် တွေ့ကြုံပြီးရင်” ငယ်ရွယ်တဲ့မိန်ခလေးတွေ ယောင်္ကျားတွေရဲ့ အကြောင်းကို ကြည့်ရုံနှင့် သူတို့ရဲ့ အကျင့်စရိတ်တွေကို သေချာစွာသိနိုင်ပါတယ်တဲ့!Jumana က အချိန်ပိုအားလပ်ချိန်တွေမှာ ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ အမျိုးသမီးတွေကိုကာကွယ်ကူညီဖို့ အသင်းဝင် ရောက်နိုင်အောင် ကူညီလုပ်အားပေးရပါတယ်လို့ bikyamasr မှာပြောပါတယ်၊ ဒါတွေက လိင်တခုထဲ မဟုတ်ပါဘူး! မိန်ခလေးတွေအတွက် လိုအပ်နေသော စိတ်ခံစားမှုတွေကို အဖွဲ့အစည်းက အခြေခံကျကူညီ စောင့်ရှောက်ပေးထားတာက မတူညီတဲ့ အချက်တွေဘဲ! သူမတို့ဘယ်လိုပြုပြင်ပေးလဲဆိုတာကြည့်လိုက်ရင်သိနိုင်ပါတဲ့! သူမတို့ ပြောဆိုနေတာက ယောကျာင်္း တွေကို ဘယ်လို နည်းတွေနှင့် လိင်ဆွဲဆောင်ရမလဲနည်းလမ်း လေးတွေပါဘဲ ? သူမတို့တတွေ လိင်ဆွဲဆောင်မှုရှိအောင် ခပ်ဟော့ဟော့နေထိုင်ကျဖို့နှင့် စီးပွားရေးဆန်ဆန်ဖွဲ့စည်း ထားတဲ့ အသင်းဖြစ်ပြီး ယောကျာင်္းတွေရဲ့ စကားကိုနားထောင်ဖို့မဟုတ်ပါဘူးလို့” ပြောပါတယ်! (ဆိုလိုတာက ကြေးစားအဆင့်ကိုပြောတာဖြစ်မှာပါ၊ ငွေရှာတာဖြစ်မယ်လေ!…..)အသဲနှလုံးထဲမှတ်ထားရမှက အဓိကမိန်းမတွေရဲ့စိတ်ဆိုးခြင်းခံရတာက လုံးဝဥဿမဟုတ်သော သူမတို့ ၀ယ် လို့မရတဲ့ အမှန်တကယ် စိတ်ရောဂါ အကြံပေးချက်တွေပါဘဲ! (ငွေရှိရင်ဒီရောဂါပျောက်ကုန်မှာပါ!…..)
သူမတွေဟာ အားလုံးသောလူတွေ သဘာဝပေးထားသော အမှန်တကယ်လိုအပ် နေသော လိင်ပျော်ရွှင်စွာဆက်ဆံနိုင်ဖို့နှင့် လိင်ပြည့်ဝစွာအဆုံးထိခံစားချစ်နိုင်ဖို့ မဟုတ်ဘူးလား? ဒါဟာ sex addicstion ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ဘဲ ဟုတ်တယ်နော်!
Jumma ပြောလ်ိုက်သေးတယ်! “ရေးရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်က ရှက်တတ်တဲ့သူတွေနှင့် တစွတ်ထိုးလုပ်တတ်တဲ့ မိန်းခလေးတွေကို သူမတို့တွေရဲ့ဘ၀ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနှင့်အများနှင့်ပျော်ရွှင်စွာ နေထိုင်နိုင် ဖို့ပါဘဲတဲ့!”မိန်းခလေးတွေကို တချို့သောလိင်စိတ်ဝေဒနာရောဂါ (ယောကျာင်္းလေးတွေနှင့် အတူအိပ်ချင်တဲ့ရောဂါမှု) ကုသရပါသေး တယ်..
တချို့သော စကာင်္ပူ မြို့လည်မှာရှိတဲ့ စီးပွားရေးအဆောက်အအုံတွေမှာ Yang Fuek ဆိုသူရဲ့ ရုံးခန်းမှာ ထိုင်ပြီး သူလူနာတွေဖြစ်တဲ့သူမအခက်အခဲတွေ ပြောဆိုနေတာကို နားထောင်ပြီး ဆွေးနွေးတိုင်ပင် နေ ပါတယ်၊ စောင့်နားထောင်ပြီးသူမရဲ့စိတ်ညစ် စိတ်ဓာတ်ကျဆင်းနေပြီး အလုပ်မသွားချင်ဖြစ်နေကြောင်း လူတွေနှင့်သူငယ်ချင်းတွေ့ချင်ကြောင်း နှင့် “နောက်ဆုံးသူမဘယ်လို ရမ္မက်တက်ကြွနေပြီး ယောကျာင်္းတွေ နှင့် အတူအိပ်ချင်ကြောင်း” ပြောပါတယ်တဲ့!Yang ကပြန်ပြောတာက ငယ်ရွယ်တဲ့မိန်းခလေးတွေဘ၀တွေကို ဘယ်လိုနည်းတွေနှင့် အနာဂတွေမှာ ဘယ်လိုပြင်ဆင်ထားရမယ်နှင့် မိမိလိုအင်ဆန္ဒတွေကို ပြည့်ဝကျေနပ်အောင်လုပ်ဆောင်ရမဲ့နည်းတွေ ပါဘဲ!သူကပြောပါတယ် ! စီးပွားရေးအဆင်မပြေမှုကတော့ ပုံမှန်တခုလိုပါဘဲ! “လူတွေရဲ့ဘ၀ဟာမြင့်လိုက်နှိမ့် လိုက်ဘဲ” အခု ၁၇နှစ်ရှိသူလေးရဲ့စိတ်ခံစားသူလေးပါ! “စီးပွားရေးအဆင်မပြေမှုကတော့ စကာင်္ပူ လူတွေရဲ့ အမြဲပါနေကျပြဿနာတခုပါဘဲတဲ့” သို့သော် ဘာတွေလဲ လိင်နောက်ဆက်တွဲ ခေါ်တဲ့ sex additionဆိုတာ?“ကိုယ်တွေ့ဖြစ်ရပ်တခုပါဘဲတဲ့! တချို့လူလာပြီးစောဒတက်ကျတယ် သူတို့ ရဲ့ဘ၀တလျှောက်လုံးမှာ တချိန်လုံးနှင့်အချိန်တိုင်း ရမ္မက်တက်ကြွချိန်မှာဘဲ လိင်ဆက်ဆံချင်ကျတယ်” လို့ bikyamasr.com မှာကို ပြောတယ်၊ သို့သော် တကယ်စိတ်ညစ်နေရပြီး ရိုးရိုးမပျော်ရွှင်မှုက အပေးအယူမမျှတဲ့ လက်ရှိဆက်ဆံ ရေးတွေပါဘဲ၊ သူမလက်ရှိ သူတို့ရဲ့လက်ရှိယောကျာင်္းတွေနှင့် ဆက်ဆံတာ မပျော်ရွှင်ကျတာဘဲ! သူမတို့ရှာနေတာက သူမတို့နှင့် အကြိုက်ခြင်း တူညီတဲ့ အပေးယူမျှတဲ့ ယောကျာင်္းတွေကိုပါဘဲတဲ့!” ကောင်းသေးရဲ့လား အပေါင်းအသင်းတို့ ဒါအခုခေတ်မှီတဲ့အနောက်ပိုင်းယှဉ်ကျေးမှုစရိတ်တွေဘဲ!ဒီမိုကရေစီလို့ပြောရမလားဘဲ…..တခုသောAsiaone ရဲ့အင်္ဂါနေ့တိုင်းမှာအခန်းဆက် တွေတောက်လျှောက် သားနေသောသတင်းလေးပါ! Yang လောင်ပြောင်ထားတာက “နောက်ဆက်တွဲဇာတ်လမ်း လေးတွေ ရေးရရင်ဘယ်တော့မှပြီးမှာ မဟုတ်ဘူးတဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာဇာတ်လမ်းတွဲလေးတွေ အများကြီး ရှိတယ်တဲ့လေ”
သူကအဓိကပြဿနာကိုရေးထားတာက လက်ရှိငြင်းခုံနေကျတာတွေရှိတယ်လေ! “ယောကျာင်္းနှင့် မိန်းမ ဘယ်သူတွေပိုပြီး တခြားသူတွေနှင့် ပိုအိပ်ချင်ကျတာလဲ? ကောင်းပြီ! ဆေးပညာအရ ဘာမှပြဿနာ မရှိပါဘူး ကုသလို့ရပါတယ်တဲ့၊ အဓိကဆေးပညာအရ စိတ်ရောဂါနှင့်ဆိုင်တဲ့ ကျွှန်တော်တို့နားလည်ထား တာက လူတွေဖြစ်လာတာက လိင် ဆက်ဆံလို့ဖြစ်လာတာပါ၊ သို့သော် ကွှန်တော်တို့မှာ ဘ၀မှာ လူအသိုင်းအ၀ိုင်းနှင့် နေထိုင်မှု တွေအတွက် လိုအပ်နေပါသေးတယ်” အမျိုးသားကြေးစားပညာရှင်ကပြောတယ်! လိင်ဆက်ဆံတဲ့အချိန် ဆေးအကူအသုံးပြုတာ ဆေးပညာအရ ဘာမှအန္တရယ် မဖြစ်ပါဘူး သို့သော် မလွန်ကျွံစေနဲ့တဲ့!” Sex Addiction ဟာ လူမှုဆက်ဆံရေး အမြင်သဘောထားအသစ်တွေကို မီဒီယာမှာရေးထားတာ အခုမှာရှိတာမဟုတ်ပါဘူး အရင်ကတည်းရေးသားထားတာအများကြီး ရှိနေပြီး နေ့စဉ်ရက်ဆက်တင် ပြ ရေးသားချက်တွေပါဘဲတဲ့ အရေးကြီးတဲ့အချက်တွေနှင့်လူတိုင်းကြိုက်တဲ့ ကဏ္ဌာန်ဖြစ်တယ်လို့ ” ထောက်ခံ ပါတယ်၊ဗြိတိန်လူမျိုး MarlonThomas စကာင်္ပူမှာနေထိုင်သူကို မေးကြည့်ပါတယ်?သူကအခုကွာရှင်းထားသူပါတဲ့ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သူမိန်းမက ရမ္မက်တက်မက်မှုလိုအပ်မှုတွေ များလွန်းလို့ပါဘဲတဲ့!သူမကပြောတယ်သူမဟာ sex addction အသင်းကပါတဲ့ သို့သော် အခု ထပ်ပြီး လက်ထပ်ထားပြီးပြီတဲ့ သူမကသူကိုပြောပါတယ် အဖော်သစ်တွေမရှာတော့ပါဘူးတဲ့” သူမ၀န်ခံပါတယ်တဲ့၊
သူကတော့ သူမအပေါ် အခုအချိန်မှာ လိင်ကိစ္စနှင့်အချစ်စိတ်တွေစိတ်ကုန်သွားပါပြီ၊ နောက်ဆက်ရန် မရှိပါဘူး၊ သူမကို ပျော်ရွှင်မှုနှင့် လိုအင်ဆန္ဒာတွေကိုမဖြည့်စီးပေးနိုင်တာ သူနားလည်တယ် ဘယ်သူကိုမှ စိတ်မဆိုးပါဘူးလို့ သူက Bikyamar.com ပြောပါတယ်၊Asiaone က ရေးသားချက်တွေကတော့ သက်ရောက်မှုအတိုင်းအတာတွေ ဘယ်လိုလူတွေရဲ့ ခံယူချက်နှင့် ခံစားချက် တွေ ဖြစ်ပျက်မှုတွေနှင့်မိသားစုအပေါ်သက်ရောက်မှုနှင့် အလုပ်တွေအပေါ်ထိခိုက်မှုတွေပါဘဲ?သို့သော်Yang နှင့်စိတ်ပညာရှင် တွေ Bikyamasr ကပြောဆိုငြင်းခုန်နေတာက sex addction က ” မီဒီယာတွေကိုရောင်းအားတက်အောင်နှင့် စာဖတ် ပရိတ်ဿတ်တွေစိတ်ဝင်စားအောင် လုပ်ဆောင် နေတာပါတဲ့” သူတို့ယုံကြည်နေတာက ဖြစ်ရပ်မှန်တွေလိင်မှုခင်းများတွေနှင့် တစုံတခုသော လူမှုရေးဖြစ် ပျက် တာတွေကိုတင်ပြလိုတာဖြစ်ပြီး လူမှုရေးဖောက်ပြန်မှုကို တားဆီးလိုခြင်းတာဖြစ်ပါတယ် အကယ်၍ လူမှုအဖွဲ့ အစည်း ကို လိင်ကိစ္စတွေ နည်းလည်စေချင်တာဖြစ်ပါကြောင်း” ဆိုပါတယ်…….
(1)စကာင်္ပူကကျောင်းသူလေးတွေငွေကို ဘယ်လိုနည်းတွေနှင့် အလွယ်ရှာနေကျလဲ?
(2)NTU graduate and Business Manager offers her body for sale at $3,500monthly
(3)Local bank’s female staff offer sex on the side
ဟီး လူရော စိတ်ရော မောဟိုက်နွမ်းနယ်သွားပီ ။
စင်ကာပူမှာတင်မက ၊ မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း ရှိသည်။ အထူးသဖြင့် ပိုက်ဆံချမ်းသာလွန်းသော ယောက်ျားများ၏ မိန်းမများ နှင့် ၊ ငယ်စဉ်က ရည်းစားထားချိန်မှာ ရည်းစားက fuck ရုံပဲ fuck သွားပြီး မယူပဲအပစ်ခံလိုက်ရလို့ သိုးနေသော အချို့ ( some ) အမျိုးသမီး ကြီးငယ်များ
ယောက်ျားဖြစ်သူသည် ဝင်ငွေအရမ်းကောင်းပြီး ချမ်းသာလာသောအခါ ၊ “ နေ့ တိုင်း စားနေကြ ဟင်း ” ကို တခြား မျက်စိပဒါသဖြစ်သော ဟင်းဖြင့် အစားထိုးရာမှ ၊ ကြာသောအခါ နေ့ တိုင်းစားနေကြဟင်း ကို ပြန်လှည့်မကြည့်တော့ ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရှိသည့် တော်တော်များများ အိမ်ထောင်သည်အမျိုးသမီးများမှာလည်း အိမ်ထောင်ကျသည့်နေ့ ကစပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဂရုသိပ်မစိုက်တော့ ၊ ဘော်ဒီအလှကို မထိန်းတော့ ။ ကြာတော့ ဝတုတ်ဖက်တီးပုတ်များဖြစ်လာပြီး ၊ အိမ်ထောင်ရှင်ယောက်ျား က မကပ်ချင်တော့ ။
without / လင်ဆိုး ဟု ခေါ်သော အိမ်ထောင်မရှိပဲ ၊ တွေ့ ရာ အမျိုးသားများ ကို လိုက်လံ ကာမအလှူပေးသော အမျိုးသမီးများကမှု အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ပေးနေခြင်း ဖြစ်သည် ။ အဓိက အချက်မှာ ၊ သူမတို့ ၏ အပျိုစင်ဘဝကို ပထမဆုံးယူသွားသော ရည်းစားဖြစ်သူ ယောက်ျားက စားပြီးနားမလည်လုပ်သွားသော အချက်က အဓိက ကျသည်။
အင်းးးးမည်သို့ ပြောရမည်ကို စဉ်းစားရင်းးးးး
ခက်လှပါချည့်ဗျာ။မိန်းကလေးတွေကို စိတ်ခံစားမှု
အိမ်ထောင်သည်တွေကြားမှာ sex နဲ့ပတ်သက်ရင် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း တောင်းဆိုဖို့ရယ်